Alatsinainy 14 Martsa 2022
Ny Maha-Marika Ny Marika Ity dia tetik'ady marika manokana sy tetik'asa famantarana. BlackDrop dia rojo fivarotana sy marika izay mivarotra sy mizara kafe. BlackDrop dia tetik'asa manokana natao tamin'ny voalohany mba hametrahana ilay feo sy torolalana famoronana ho an'ny orinasam-pamoronana freelance ho an'ny tena manokana. Ity Brand Identity ity dia noforonina mba hametrahana ny Aleks ho mpanolo-tsaina marim-pototra amin'ny vondrom-piarahamonina. Ny BlackDrop dia mijoro ho marika fanombohana mangatsiatsiaka, ankehitriny, mangarahara ary mikendry ny ho lasa marika farany, azo zahana ary alohan'ny indostrian'ny indostria.
Andian-Tsary Ny tetik'asan'ireo mpanakanto dia manararaotra ny endrik'ireo tranobe U15 hamoronana fifandraisana miaraka amin'ireo singa voajanahary ao anatin'ny alàlan'ny sary an-tsaina. Manararaotra ny firafitry ny fanorenana sy ny ampahany aminy, arakaraka ny lokony sy ny endriny, dia manandrana misintona toerana manokana izy ireo toy ny Chinese Stone Forest, ny American Devil Tower, ho toy ny sary voajanahary goavam-be toa ny riandrano, renirano ary ny hantsam-bato. Mba hanomezana fandikana samihafa amin'ny sary rehetra dia mandinika ny tranobe ireo mpanakanto amin'ny alàlan'ny fomba minimalista, mampiasa zoro sy fomba fijery samihafa.
Asabotsy 12 Martsa 2022
Famantaranandro Argo avy amin'i Gravithin dia tapa-tsipika izay manana ny aingam-panahy avy amina sextant. Izy io dia misy soratra roa vita sokitra, azo alaina ao anaty alokaloka roa, Deep Blue sy Black Sea, ho fanomezam-boninahitra ny angano sambo Argo. Nirehareha ny fony noho ny hetsika quartz Soisa Ronda 705, raha ny fitaratra safira sy ny vy mahery 316L kosa no miantoka ny fanoherana bebe kokoa. Izy io koa dia misy rano an'ny 5ATM. Ny famantaranandro dia hita amin'ny loko telo samy hafa (volamena, volafotsy ary mainty), alokaloka roa (Deep Blue sy Black Sea) ary modely enina amin'ny enina, amin'ny fitaovana roa samy hafa.
Zoma 11 Martsa 2022
Boaty Mitombo Vita Tamim-Pahombiazana
Alakamisy 10 Martsa 2022
Boaty Mitombo Vita Tamim-Pahombiazana Bloom dia boaty mitombo tsara vita amin'ny laoniny izay miasa toy ny fanaka an-trano manaingo. Izy io dia manome toe-javatra mitombo tonga lafatra ho an'ny fahombiazana. Ny tanjona voalohany amin'ny vokatra dia ny famenoana ny faniriana sy ny fikolokoloana ireo izay monina any an-tanàn-dehibe izay tsy miditra ny tontolo iainana maintso. Ny fiainana an-tanàn-dehibe dia miatrika fanamby maro amin'ny fiainana andavanandro. Izany dia mitarika ny olona tsy hiraharaha ny toetrany. Bloom dia mikendry ny ho tetezana eo amin'ny mpanjifa sy ny faniriany voajanahary. Tsy vita automatique ilay vokatra, mikendry ny hanampy ny mpanjifa. Ny fanohanan'ny fampiharana dia ahafahan'ny mpampiasa mandray andraikitra miaraka amin'ny zavamaniry izay ahafahan'izy ireo mikolokolo.
Alarobia 9 Martsa 2022
NISSAN Calendar 2013 Kalandrie Alarobia 6 Jolay
GlassOn 40 "ny Tv Nitarika Talata 5 Jolay
Tango Pouch Kitapo, Kitapo Hariva Alatsinainy 4 Jolay
Ny Maha-Marika Ny Marika Andian-Tsary Famantaranandro Ny Famolavolana Anatiny Boaty Mitombo Vita Tamim-Pahombiazana Trano Fiangonana